Myanmar Defence Weapons: Myanmar Navy Frigate
Myanmar Navy Frigate
foure October 3, 2010 at 7:52 AM
I am so please to see our navy frigate in the myanmar military defense website.
We,myanmar navy, are the first one in S.E asia to design our own frigate(greater than 100m) without foreign help.Only naval architect of our navy design,calculate using new & high tech software although it is based on 77 m corvette.
In near future, i believe that navy will be able to build stealth frigate based on experience gained from this ship.
*the facts i described above only refer to ship hull only*
Ma kyoiKyoi October 3, 2010 at 10:54 AM
good news & good frigates for mm navy.
knockout May 18, 2011 at 5:10 AM
ဗမာ့ ရေတပ်မတော် အနေနဲ့ .. ဒီထက်မကတဲ့ စွမ်းရည်မျိုး နည်းပညာမျိုးလိုတာတော့အမှန်ပဲ .. ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းအနေအထား ဗမာပြည်ရှိနေတဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအနေအထား အရပဲ ..ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပဲ အင်အားရှိတဲ့ ရေတပ်ကို တည်ဆောက်ပစေဦး အရင်ဆုံးတိုင်းပြည်ရဲ့ ဓနအင်အား ..ပညာရေးတိုးတက်မှူ ကအဓိက အရေးကြီးတယ်.. တကယ်တော့ တိုင်းပြည်မှာ ရေတပ်က ကိုယ်ပိုင် ကလပ်စ် နဲ့ တိုက်ရေ
ယဉ်တွေထုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ် သိသလောက်တော့ ၅၅ စီးရီး
၇၇ စီးရီး နဲ့ အခု F စီးရီးတွေပဲ .. ဒါပေမယ့် သင်္ဘောပေါ်မှာ ရှိတဲ့
နည်းပညာက အင်မတန် အဆင့်နိမ့်ပါတယ် ..အခု တပ်တော်ဝင်လုပ်နေ
တဲ့ ဖရီးဂိတ် တွေမှာ ပေ ၃၀၀ ကျော်လို့ သာ ဖရီးဂိတ် အမည်တပ်
လိုက်ရတာပါ နည်းပညာအရ တပ်ထားတဲ့ ဂန်းရေဒါနဲ့ အရှေ့ က ၇၆ မီလီမီတာ အောက်တိုမရားလား နောက်က တရုပ်လုပ်Anti Ship Missal ဒါတွေဟာ အိမ်နီးချင်းမှာ ဘင်္ဂလားကို ယှဉ်လို့ ရနိုင်ပေမယ့် ယိုးဒယားဆိုရင်တော့ အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ် .. အခု လက်ရှိ ရေ
တပ်က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရေယဉ် စုတွေအခြေအနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ကမ်း
ရိုးတန်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အများကြီး အခြေအနေ နိမ့်ပါတယ် .. အရေး
အကြီး ဆုံးအချက်က ဒီဘလောက် ကို တည်ထောင်သူ နောင်တော်တို့ 
နဲ့ .. ၀င်ဖတ်သူတွေထဲမှာ ရေတပ်အကြောင်း ကို ဂဃနဏ သိတဲ့လူ
ရှိမယ်ဆိုရင် အဓိက ပြသနာဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်မှာပါ ..
ဘယ်လိုပဲ Material တွေကို အဆင့်မြှင့် ဖို့ ကြိုး စား ကြပါစေ ရေ
တပ်မှာ ရှိတဲ့ ရေတပ်သားတွေနဲ့ အုပ်ချုပ် သူအရာရှိတွေရဲ့ Morality ကိုမမြှင့်တင်နိုင်သရွေ့ ဘယ်လိုမှ ဒီရေတပ် ကောင်းလာဖို့ မရှိပါဘူး ..
အခုလောလော ဆယ် ..ကိုယ့်သင်္ဘောက ရှိရှိသမျှ ပစ်စည်း အကုန်
ဖြုတ်ရောင်းစားတဲ့ ရေတပ်သားတွေနဲ့ ..အရာရှိဖြစ်ဖို့ လောက်သာ စိတ်
၀င်စားတဲ့ ရေတပ်ဗိ်ုလ် တွေနဲ့ အပေါ်က သင်္ဘောတွေ ပင်လယ်ပြင်မှာ
ဘယ်လို လှုတ်ရှားနေကြတယ် ဆိုတာ သိကြမယ်ဆိုရင် ငို အားထက် ရယ်အားသန်ကြမယ် လို့ ထင်မိကြောင်း ...။
MM May 21, 2011 at 9:51 PM
အခုလို အာနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြသွားတဲ့ ကိုknockout ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဒီဘလောဒ်လေးကို ကျွှန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရေးနေတာပါ...ပြီးတေ့ာအရင်က ပြောဘူးသလိုပါဘဲ ကျွှန်တော်က တပ်မတော်သား တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး ဒီတော့ ကျွှန်တော်ရေးတာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်ပါတယ် အခေါ်အဝေါ်ကအစပေါ့လေ...နောက်ပိုင်းမှာ ကျွှန်တော့်ကို ဆက်လက် ဝေဖန်ပေးပါဦးခင်ဗျာ...။
မြောက်ကိုးရီးယား၏ S-300 ဟန် လေယာဉ်ပစ်ဒုံးစနစ်
Myanmar Navy Dorkyard